Wadooyinka Muqdisho Oo Wali U Xiran Maamulka Farmaajo. – Bogga Calamada.com
Wadooyinka Muqdisho Oo Wali U Xiran Maamulka Farmaajo.
Maalmo xiriir ah waxaa xiran wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay xirteen maleeshiyaatka dowlada Ridada ee hogaanka uu u yahay Murtad Farmaajo.
Wadooyinka ugu waaweyn ee magaalada Sida Warshadaha,Soddonka,Wadnaha,Maka Al-mukaramah iyo Wadadooyinka soo gala Magaalada ayeey dhagaxaan iyo agabyo kale ku jireen maleeshiyaatka Ashahaado la dirirka maamulka Farmaajo.
Xirnaanshaha Wadooyinkan ayaa dhibaato xoogan ku noqotay shacabka Muqdisho,waxaana inta badan xiran goobihii adeegyada bulshada ee magaalada Muqdisho,waxeyna dadka shacabka ku qasbanaadeen iney ku lugeeyaan Wadooyin Qarda Jeex ah.
Xirnaanshaha Wadooyinka Muqdisho ayaa kusoo aadeysa xilli Shacabka magaalada ay u diyaar garoobayaan Munaasabada Ciidul Fidriga oo ay naga xigta ugu Badnaan Shan Maalmood,waxeyna Tani muujineysa in maamulka Farmaajo doonayo in shacabka Muslimka magaalada Muqdisho ka hor istaaga farxada iyo damaashaadka Ciidul Fidriga.